याकूब ४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
४ तिमीहरूमाझ लडाइँ र झगडा कहाँबाट आयो? के ती तिमीहरूकै अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने तिमीहरूका शरीरको अभिलाषाबाट आएका होइनन्‌ र? २ तिमीहरू इच्छा गर्छौ तैपनि पाउँदैनौ। तिमीहरू हत्या गर्छौ र लालच गर्छौ तैपनि हासिल गर्न सक्दैनौ। तिमीहरू झगडा गर्छौ र लडाइँ गर्छौ। तिमीहरूले पाएका छैनौ, किनभने तिमीहरूले मागेकै छैनौ। ३ तिमीहरू माग्छौ तैपनि पाउँदैनौ, किनकि तिमीहरू आफ्नो शरीरको अभिलाषा पूरा गर्न गलत उद्देश्यले माग्छौ। ४ हे धोकेबाजहरू* हो, यस संसारसितको मित्रता परमेश्वरसितको शत्रुता हो भनेर के तिमीहरूलाई थाह छैन? त्यसकारण, जो यस संसारको मित्र हुन चाहन्छ, उसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाइरहेको हुन्छ। ५ अथवा के तिमीहरूलाई धर्मशास्त्रले यो कुरा बेकारमा भनेको हो जस्तो लाग्छ: “ईर्ष्या गर्ने झुकावले गर्दा हामी विभिन्न कुराको चाहना गरिरहन्छौं”? ६ तर उहाँले दिनुहुने असीम अनुग्रह त्यो झुकावभन्दा प्रबल छ। त्यसैले, धर्मशास्त्र भन्छ: “परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई असीम अनुग्रह देखाउनुहुन्छ।” ७ त्यसकारण, आफूलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र दियाबलको विरोध गर अनि ऊ तिमीहरूबाट भाग्नेछ। ८ परमेश्वरसित नजिक होओ र उहाँ तिमीहरूसित नजिक हुनुहुनेछ। हे पापीहरू हो, आफ्नो हात शुद्ध पार। हे दोमनेहरू हो, आफ्नो मन चोखो बनाओ। ९ दुःखित होओ, शोक मनाओ र रोओ। तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको खुसी खिन्नतामा परिणत होस्। १० आफूलाई यहोवाको नजरमा नम्र बनाओ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। ११ हे भाइहरू हो, एक-अर्काविरुद्ध बोल्न छोड। जसले आफ्नो भाइविरुद्ध बोल्छ वा उसको न्याय गर्छ, उसले व्यवस्थाविरुद्ध बोल्छ र व्यवस्थाको न्याय गर्छ। अब यदि तिमी व्यवस्थाको न्याय गर्छौ भने तिमी व्यवस्था पालन गर्ने होइन तर त्यसको न्यायकर्ता पो भयौ। १२ व्यवस्थाको दाता र न्यायकर्ता एकै जना हुनुहुन्छ, जसले उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ अनि नाश पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर आफ्नो छिमेकीको न्याय गर्ने तिमी को हौ? १३ तिमीहरू यसो भन्छौ: “आज कि भोलि हामी फलानो सहरमा जाऔंला अनि त्यहाँ एक वर्ष बिताऔंला र व्यापार गरेर नाफा कमाऔंला,” १४ जबकि तिमीहरूको जीवन भोलि के हुने हो, त्यो तिमीहरूलाई थाह छैन। किनकि तिमीहरू त एकछिन देखापरेर बिलाइहाल्ने कुहिरो हौ। १५ बरु तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने थियो: “यहोवाको इच्छा भए हामी बाँचौंला अनि यसो गरौंला र उसो गरौंला।” १६ तर तिमीहरू धक्कु लगाउँदै घमन्ड गर्छौ। यसप्रकारको सबै घमन्ड दुष्ट कुरा हो। १७ त्यसकारण, जसले सही काम गर्न जानेर पनि गर्दैन, उसले पाप गरिरहेको हुन्छ।
^ या ४:४ * शाब्दिक, “आफ्नो पतिबाहेक अरूसित यौनसम्बन्ध राख्नेहरू।”